Project Linda သို့မဟုတ်သင်၏ Razer ဖုန်းသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည့်အချိန်တွင် | Gadget သတင်း
Ruben gallardo | | လက်တော့ပ်
ဒါဟာဝေးကိုယူမပေးပါ နောက်မျိုးဆက်မိုဘိုင်းသည်မည်သည့်စက်ကိုမဆို ဦး နှောက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကို Razer နှင့်သူ၏ Razer Phone တို့ကအာရုံစိုက်မည့်အားကောင်းသော Android terminal မှစဉ်းစားလိမ့်မည် ဂိမ်းကစားခြင်း; တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်၎င်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများသည်အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ Razer သည်ဤမိုဘိုင်းဖုန်းကိုရောင်းချရုံသာမက Laptop များတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာနှစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းပါကရလဒ်အမည်မှာ စီမံကိန်း Linda.
Razer သည်အထူးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် Razer ဖုန်းမှ ပို၍ ပင်ထုတ်ယူနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ပြီးတော့ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းဟာလက်တော့ပ်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကို CES 2018. တွင်တင်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်ဤအယူအဆသည်မကြာမီထုတ်လုပ်မှုသို့ရောက်လိမ့်မည် သူ့ရဲ့စျေးနှုန်းက ၉၉ ဒေါ်လာပါ ဤငွေပမာဏသည် ၉၉ ယူရိုသို့ဘာသာပြန်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီ Linda အကြောင်းဒီ Project အကြောင်းလေ့လာကြည့်ရအောင်။
အပေါ်ကဗီဒီယိုတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း Razer ဖုန်းသည်လက်တော့ပ်၏ trackpad ဖြစ်လာသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကကိရိယာဖြစ်သည်။ အသင်းနှစ်ခုစလုံးကိုစုစည်းပြီးသည်နှင့် Project Linda ဟာ Android Laptop တစ်လုံးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ပို။ ပင်အဆင်ပြေလမ်းအတွက်ကစားရန်နှင့်အတူ။
ဒီမှတ်စုစာအုပ်မှာတစ် ၁၃.၃ လက်မ Multi-touch မျက်နှာပြင် ထောင့်ဖြတ်လမ်းကြောင်းအမြင့်ဆုံး QHD resolution ကိုကမ်းလှမ်း ထိုနည်းတူစွာကီးဘုတ်သည် Razer နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည့်အပြင်အလင်းရောင်တွင်သာမကလုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပါစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤ Project Linda သည် Razer ဖုန်း၏ extension တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် Android သော့များရှိပြီးဖုန်း၏ကွဲပြားခြားနားသော menu များမှတဆင့်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာနှင့်အဆင်ပြေစွာသွားလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စဉ်တွင်, ဤစီမံကိန်း၏အလေးချိန်မှာအတော်လေးနိမ့်သည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ထည်ကိုအလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအထူမှာ ၁.၅ စင်တီမီတာဖြစ်သည်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းသည်သင့်အား application များ download လုပ်ရန်နှင့်၎င်းတွင်ရှိသည့်ဖိုင်အမျိုးမျိုးကိုသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် 200 GB ပြည်တွင်းရေးသိုလှောင်မှု drive ကို။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အချက်တစ်ခုကသူတို့ဟာ Razer ဖုန်းရဲ့ရှေ့စပီကာတွေရဲ့အားသာချက်ကိုယူတာပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာ Laptop တွေပေါ့။ Razer ကမင်းကိုချန်ထားပေမယ့်အခုတော့လွှတ်ပေးမယ့်ရက်မရှိပါဘူး မေးခွန်းပုံစံ ၎င်းကိုဖြည့်ရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်နှင့်မကြာမီသင်သိရန်အကြောင်းကြားရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ကွန်ပြူတာများ » လက်တော့ပ် » Linda ကိုစီမံပါ၊ သို့မဟုတ်သင်၏ Razer ဖုန်းသည်လက်တော့ပ်ဖြစ်လာသည်
ဆိုနီ၏ချစ်ဖွယ်ကောင်းသော Aibo စက်ရုပ်ခွေးသည်လှည့်ကွက်များပိုမိုလုပ်သည်
CES 2018 အကောင်းဆုံး